Myanmar survey shows swift and damaging impact of COVID-19 on media – MDIF
Myanmar survey shows swift and damaging impact of COVID-19 on media
Yangon, July 16, 2020: A survey in English and Burmese published by Media Development Investment Fund’s Myanmar Media Program confirms that the impact of COVID-19 on Myanmar media has been swift and damaging. The most dramatic impact is on their bottom lines.
MDIF,anot-for-profit investment fund providing financing to independent media in countries where access to free and independent news and information is under threat, conducted the survey in June to answer key questions about the impact of the virus during the period March through May. The report, “Myanmar Media’s Response to COVID-19”, addresses key questions, such as: How was COVID-19 impacting media operations? How were media responding? How did they see their prospects for the coming months?
All but two of the 36 respondents experienced revenue declines between March and May. Half reportedafall in revenue of 75% or more, considerably higher than the 40-60% that MDIF’s partners elsewhere in the world reported during the same period.
Amidst this hardship, there isaglimmer of good news. As has been experienced by media in other countries, Myanmar media have seenamarked growth in their digital audiences, as people turn to trusted news sources during this time of great uncertainty.
Myanmar media have so far managed to survive the economic shock of COVID-19, itself an impressive feat, by taking tough decisions on costs, sometimes having to cut salaries just to stay afloat. With few signs that the economic crisis is easing, there will doubtless be many more hard decisions to make in the weeks and months to come.
A big question is whether media can turn this difficult situation into an opportunity by rethinking their strategies and, in doing so, building more resilient businesses that will survive in the long-term. Their success in doing so will determine whether audiences will continue to have access to the independent news and information they require during this important time in Myanmar’s history.
In order to continue to track the impact of COVID-19 in the months to come, MDIF plans to conduct another survey of Myanmar media towards the end of the year. Both surveys are components of MDIF’s multi-year business capacity building program for independent media in the country, the Myanmar Media Program (MMP).
MDIF isanot-for-profit investment fund based in New York, USA. It provides debt and equity financing to independent media companies in countries where access to free and independent media is under threat. With more than $105 million assets under management, since 1996 MDIF has invested more than $230 million in 120 independent media businesses in 42 countries. Its investments help independent media around the world provide the news, information and debate that people need to build free, thriving societies.
About MDIFs Myanmar Media Program (MMP)
MMP is an MDIF initiative designed to increase the prospects for the sustainability of the media sector in the country by improving the business and management capacity of independent media. It is supportingadozen independent media organizations –amix of national and local news outlets of different sizes and media types – with intensive mentoring and various forms of tailored technical assistance aimed at improving their business and management capacity. An additional two dozen media have access toaless intensive capacity building program designed to fit their specific needs.
For more information, contact Peter Whitehead, Director of Communications, peter.whitehead@mdif.org
COVID-19 သည် မြန်မာ့မီဒီယာအပေါ် အလျှင်အမြန် ပျက်စီးထိခိုက်စေသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေကြောင်း မြန်မာစစ်တမ်းက ပြဆိုနေပါသည်
ဂျုလိုင် ၁၅ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ Media Development Investment Fund (MDIF) မှ ယနေ့ထုတ်ဝေသော စစ်တမ်းတစ်စောင်က COVID-19 ၏ မြန်မာမီဒီယာအပေါ် သက်ရောက်မှုသည် လျင်မြန်ပြီး ပျက်စီးထိခိုက်စေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ သိသာမှုအများဆုံးသော သက်ရောက်မှုသည် မီဒီယာများ၏ အခြေခံကျသော အရေးအကြီးဆုံး ကဏ္ဍများအပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
MDIF သည် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသော သတင်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီရန် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော နိုင်ငံများရှိ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသော အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MDIF အနေဖြင့် မတ်လမှ မေလအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ သက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အဓိက မေးခွန်းများပါဝင်သော စစ်တမ်းတစ်ခုကို ဇွန်လတွင် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ COVID-19 သည် မီဒီယာလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သနည်း။ မီဒီယာများအနေဖြင့် မည်သို့ တုန့်ပြန်ကြသနည်း။ လာမည့်လများတွင် မီဒီယာများ၏ အလားအလာ မည်သို့ရှိလာမည်နည်း။
ဖြေဆိုသူ ၃၆ ဦး အနက် ၂ ဦးမှ လွဲ၍ မတ်လနှင့် မေလ အတွင်း ၀င်ငွေကျဆင်းခြင်းကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူ ထက်ဝက်သည် ရ၅% နှင့်အထက် ၀င်ငွေကျဆင်းခဲ့မှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကျဆင်းနှုန်းသည် ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများရှိ MDIF ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ မတ်လနှင့် မေလအတွင်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော ၀င်ငွေကျဆင်းမှု ၄၀%မှ၆၀% ထက် သိသိသာသာများနေပါသည်။
ဤအခက်အခဲများကြားတွင် သတင်းကောင်းကရှိနေပြန်ပါသည်။ မသေချာသည့်အချိန်ကာလတွင် လူများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအရင်းအမြစ်များဘက်ကို လှည့်လာသည့်အလျောက် မြန်မာမီဒီယာများအနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ပရိသတ် သိသိသာသာတိုးပွားလာသည်ကို အခြားနိုင်ငံများမှ မီဒီယာများကြုံတွေ့သကဲ့သို့ တွေ့ မြင်လာကြသည်။
မြန်မာမီဒီယာများသည် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းအားဖြင့် COVID -19၏ စီးပွားရေးထိတ်လန့်မှုအပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ခက်ခဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် လစာလျှော့ခြင်းလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ပါဝင်ပါသည်။ ဤသို့ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းသည်ပင်လျှင် အထင်ကြီးစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းနည်းလာသည့် နိမိတ်လက္ခဏာအနည်းငယ်တွေ့လာရသည်နှင့်အတူ လာမည့် သီတင်းပတ်များ၊ လများအတွင်း ပိုခက်ခဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်လာရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်းကြီးတစ်ခုမှာ မီဒီယာများသည် ၄င်းတို့၏ မဟာဗျုဟာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ဤခက်ခဲသောအခြေအနေကို အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ရေရှည်တွင် ရှင်သန်နိုင်မည့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပါသည်။ မီဒီယာများ၏ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် မြန်မာပြည်သမိုင်းတွင် ဤအရေးကြီးသောအချိန်ကာလအတွင်း ပရိသတ်များအနေဖြင့် ၄င်းတို့လိုအပ်သော အမှီအခိုကင်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်လက်ရရှိမှုရှိမရှိကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မည်။
လာမည့်လများအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမည့် COVID-19၏ သက်ရောက်မှုကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန် MDIF အနေဖြင့် နောက်ထပ်မြန်မာမီဒီယာစစ်တမ်းတစ်ခုကို ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ စစ်တမ်းနှစ်ခုလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမှီအခိုကင်းသောသတင်းမီဒီယာများအတွက် MDIF၏ တစ်နှစ်ထက်ပိုသော စီးပွားရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်မှ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်(Myanmar Media Program MMP)။
Media Development Investment Fund အကြောင်း
MDIF သည် အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည်။ လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာကို အသုံးပြုခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသော နိုင်ငံများရှိ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာများကို debt financing နှင့် equity financing တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ MDIF၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ၁၀၅သန်းကျော်ရှိပြီး ၁၉၉၆မှစ နိုင်ငံပေါင်း ၄၂နိုင်ငံရှိ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာလုပ်ငန်း ၁၂၀တွင် ဒေါ်လာသန်း၂၃၀ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ တည်ဆောက်ရန် လူများလိုအပ်သော သတင်းများ၊ အချက်အလက်များ နှင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာများအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် MDIF ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက အကူအညီပေးပါသည်။
MDIF ၏ Myanmar Media Program အကြောင်း
MMP သည် အမှီအခိုကင်းသော သတင်းမီဒီယာများ၏ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ မီဒီယာကဏ္ဍရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုအလားအလာကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် MDIF၏ ပဏာမအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ MMP သည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော မတူညီသည့် ပြည်တွင်း နှင့် ဒေသတွင်း သတင်းမီဒီယာဆယ့်နှစ်ဖွဲ့ ကို စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရည်ရွယ်သည့် နည်းပညာအကူအညီများပေးခြင်း၊ ကာလရှည်အနီးကပ်သင်ကြားပြသပေးခြင်း ဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျန် မီဒီယာနှစ်ဆယ့်လေးဖွဲ့ကို အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဖြင့် လုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့် ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီပေးနေပါသည်။
ယခုစစ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို ထပ်မံသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Peter Whitehead, Director of Communications, peter.whitehead@mdif.org
Interactive: Impact Dashboard 2020